window7nltdr missing - MYSTERY ZILLION
မူလ › Windows › Windows7ဝင်ရောက်ရန် · အဖွဲ့ဝင်ခြင်း မင်္ဂလာပါ!
window7nltdr missing
lincachara July 2011 edited July 2011 in Windows7I can't install the window from my window7cd it is appear the ntldr or ntlrd missing,soplease tell me how can i installation to my computer . Tagged:
lincachara July 2011 Registered Users please answer me..............,and give me some idea how to handle for this problem because i already formatted the partition c also and i haven't any recovery partition on my hard disk ,it is NTLDR missing in start up so i cannot booting by anyway. lincachara July 2011 Registered Users သိရင်လဲပြောပြပေးကြပါဗျာ,အဲလိုမျိုးကြီးတော့မနေကြပါနဲ့ဒီမှာကတစ်ကယ်ဒုက္ခရောက်နေလို့ပါဗျာ TipTop-ChanChan July 2011 Registered Users insert your window7cd and repair with startup repair... it will be ok... Sniper July 2011 Registered Users +++ကျွန်တော်လည်း ကြုံဖူးပါတယ်။ တခြားကောင်းနေတဲ့စက်တစ်ခုထဲက NTLDR ဖိုင်တစ်ခုကို ယူပြီး ထည့်ပေးလိုက်တာ ကောင်းသွားဖူးပါတယ်။ လုပ်ပုံလုပ်နည်းအသေးစိတ်ပါ တခါတည်းပြောပြလိုက်ပါမယ်။ သိပြီးဆိုလည်း ခွင့်လွှတ်ပါ။ ၁။ ကောင်းနေစက်တစ်ခုမှာ Folder option ကို၀င်ပြီး hidden files နှင့် protected system files တွေကို ဖော်ပြဖို့ လုပ်ရပါမယ်။ ၂။ C partiotion အောက်က ntldr ကို usb flash drive မှာ ကူးထည့်ပါ။၃။ ပျက်နေတဲ့စက်ကို live cd တစ်ချပ်နဲ့ boot လုပ်ပါ။ ပြီးရင် ကူးထားတဲ့ ntldr ဖိုင်ကို C partition ​အောက်ကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် H.D.D ကနေ boot တက်ကြည့်ပါ။+++နောက်တစ်ခုက လက်ရှိ installer CD နဲ့ windows repair လုပ်ကြည့်ပါ၊ မရရင် CD အသစ်၀ယ်ပြီး ပြန်တင်ကြည့်ပါ။ +++ကျွမ်းကျင်လို့တော့မဟုတ်ပါ။ သိသလောက်ကူညီလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေ။ K July 2011 Moderators 1. Insert the Windows XP bootable CD into the computer. 2. When prompted to press any key to boot from the CD, press any key. 3. Once in the Windows XP setup menu press the "R" key to repair Windows. 4. Log into your Windows installation by pressing the "1" key and pressing enter. 5. You will then be prompted for your administrator password, enter that password. 6. Copy the below two files to the root directory of the primary hard disk. In the below example we are copying these files from the CD-ROM drive letter, which in this case is "e." This letter may be different on your computer. copy e:\_i386\_ntldr c:\_ copy e:\_i386\_ntdetect.com c:\_ 7. Once both of these files have been successfully copied, remove the CD from the computer and reboot. lincachara July 2011 Registered Users thank for your comment ,then i'll be try.But i already format the C partition so i don'tknow how to do. K July 2011 Moderators Ekk.. you don't need to format the whole drive just for ntldr missing. !_! lincachara October 2011 Registered Users အစ်ကိုတို့ရှင်းပြတာတော့နားလည်တယ်ဒါပေမယ့် c partition အောက်မှာကဖိုင်တွေကအများကြီးပဲဗျ၊အဲဒီNTLDR ဖိုင်ကိုရှာတာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေလို့၊နေရာလေးပါအသေအချာပြောပြပေးကြပါနော်။show hidden file လဲလုပ်ကြည့်ပြီးပါပြီဖိုင်တွေကများနေတော့ရှာလို့မတတ်လို့ပါ XIIMan March 2012 Registered Users So you have to install Windows7again. I had similar trouble last year ago, I formatted C Partition and made Windows7Clean Installation. puhshain June 2012 Registered Users လွယ်တာကတော့ hiren နဲ့တက်ပြီး သူပိုင်ပဲသွားထည့်တာကြည့်နေလိုက်ပါသကော... winaingso June 2012 Registered Users တခြား ဝင်းဒိုး7စီဒီခွေပြောင်းသုံးကြည့်ပါလား။Desktop ဆိုရင် cd drive ပါချိန်းကြည့်ကြည့် အပိုရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့။ တစ်ခါတစ်လေ ဝင်းဒိုးခွေကြောင်ပြီးဖြစ်တတ်ပါတယ် .... Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla